» हामीले हेलिकप्टर चड्दा तपाईंको टाउको दुखाइ किन? – जङ्मु शेर्पा हामीले हेलिकप्टर चड्दा तपाईंको टाउको दुखाइ किन? – जङ्मु शेर्पा – हाम्रो खबर
हामीले हेलिकप्टर चड्दा तपाईंको टाउको दुखाइ किन? – जङ्मु शेर्पा
2021, March 17th, Wednesday
admin 1484 Views
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी पत्नी जाङ्मु इन शेर्पाले आफ्नो माइतीघर जाँदा चार वटा हेलिकोप्टर लिएर सरकारी पैसा दुरुपयोग गरेको भन्दै विभिन्न मान्छेहरूले गलत प्रचार गरेको बताएकी छिन्।
केही समय अघि हेलिकोप्टर लिएर माइती गाउँ गएको तस्बिर जाङ्मुले नै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
उक्त पोस्ट सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका थिए । केहीले सरकारी पैसाको दुरुपयोग गर्दै हेलिकोप्टरमा ससुराली गएको आरोप समेत लगाएका थिए। त्यसको जवाफमा बुधवार सामाजिक सञ्जालमार्फत जाङ्मुले स्पष्टिकरण दिएकी हुन्।
‘यो त अति नै भो! झुटको खेतीमा रमाउने, सत्यकाे खाेजी नगर्ने, अनि हावामा सबै दाैडने! हाे म मेरो श्रीमान माननीय मुख्यमन्त्री सहित हामी (मेरो परिवार सहित एक महिना अघि फागुन १३ गते)मेरो माइती गाउँ गएकाे साँचाे हाे। मेरो श्रीमान पार्टीकाे औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिन जानु भएकाे हाे। तर अरुले भने जस्ताे चार वटा हेलिकप्टर लिएर सरकारी पैसा द्युरुपयाेग गरेर होइन। मेरो परिवार निजी खर्चमा हेलिकप्टर लिएर आफ्नो गाउँ जानु भयो तपाईँको टाउको दुखाई किन?’
जाङ्मुले धेरै झुटकाे खेती र धन्दा गर्ने ब्यापार किन गर्नु पर्‍यो भनी प्रश्न पनि उठाएकी छिन। उनले आफ्नो माइती भएकै गाउँमा श्रीमानकाे कार्यक्रम परेको र मुख्यमन्त्री आफ्नो व्यवस्थापनमा गएको र सँगै आफूहरु पनि गएको स्पष्टिकरण दिएकी छिन। केही समय अघि मात्रै मोडेल जाङ्मु र मुख्यमन्त्री राईबीच प्रेम विवाह भएको थियो।